I-Mallavale Farm Boat Harbour - ukubukwa kolwandle okumangalisayo - I-Airbnb
I-Mallavale Farm Boat Harbour - ukubukwa kolwandle okumangalisayo
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguGeorgia
Indlu enamagumbi amabini okulala kwigadi entle, enembonakalo entle yeTafile yeKapa kunye neBass Strait, kanye phezulu kunxweme lwaseBoat Harbour. Iihektare ezi-2 zegadi yabucala kunye nesidiliya sijikeleze indawo yokuhlala, kunye negadi yeziqhamo egcwele i-walnuts kunye neziqhamo. Yonwabela amaqanda asefama amatsha kunye negranola eyenziwe ngesandla kwisidlo sakusasa. Ikhitshi elisesitayileni elitsha, i-Wi-Fi yasimahla, umlilo weplanga opholileyo, iimpahla ezisemgangathweni, i-spa, idesika ene-Weber Q kunye nomnyango wabucala ugqibezela olu sapho lumnandi okanye ukurhoxa kwezibini.
Iimbono ezikule ndawo ziyamangalisa- zeTable Cape, Bass Strait, Rocky Cape kunye naphakathi kwelizwe ukuya kumazantsi eentaba kuMntla Ntshona. Izitiya ziyamangalisa- ziyilwe ligcisa elijikeleze i-avenue yemithi ye-elm yakudala, ikhuliswe iminyaka kwaye ngoku ifunwa njengendawo yomtshato.
Iindwendwe zinikwa amaqanda asefama amatsha, igranola eyenziwe ngesandla kwaye banokuzifumana kwimveliso yegadi. Amadlelo eegusha achumileyo eFama yaseMallavale aqhuba iinkomo zenkomo ezanelisekileyo kwaye iindwendwe zinokundwendwela ibhloko yehlathi elahlukileyo lale ndawo. Konke oku kukwi-2km nje ukusuka kulwandle oluhle lwe-Boat Harbour.
I-Boat Harbour ibizwa ngokuba lolona lwandle lubalaseleyo lwaseOstreliya. IFama yaseMallavale imi encotsheni yenduli yeBoat Harbour, umgama nje ongama-2km ukusuka elunxwemeni, iqhayisa ngembonakalo yeBass Strait, iTable Cape kunye neRocky Cape kunye nelizwe elisingise kwiNtaba yeCradle. Kukho ikhefi enkulu ezantsi kwiklabhu ephithizelayo yokusefa kunye nelokishi yaseBoat Harbour ekwiBass Highway inekhefi entle (I-Thistle Hut) kunye nevenkile gabalala/indawo yokumisa amafutha. I-Wynyard yi-15km ezantsi kwendlela, kunye nonxibelelwano lwesikhululo seenqwelomoya ngokuthe ngqo ukuya eMelbourne kunye nokuthenga okukhulu, ezemidlalo kunye namaziko onyango. Ukuba unokuzitsalela kude kwidesika, okanye kwisanti emhlophe kunye namanzi acwengileyo e-turquoise elunxwemeni, zininzi iihambo ezintle zosuku olunokwenzeka ukusuka apha-ukuya kwintlango yaseTarkine, kwiLali yaseStanley kunye neNut, iNtaba yeCradle, iLeven Canyon, IiDip Falls, iMontezuma Falls ukukhankanya nje ezimbalwa. ISisters Beach kunye neRocky Cape National Park zimi kwimizuzu nje emihlanu phantsi kwendlela, njengoko ingummangaliso wendalo weTable Cape, kunye nesakhiwo sayo esikhanyayo esikhanyayo kunye nefama yetulip.
Sikufuphi kwifama yaseMallavale ukuba uyasifuna.
Inombolo yomthetho: DA35/2003
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Boat Harbour